Lioka 18 - Ny Baiboly
Lioka toko 18
Ilay mpitondratena nanao lemozy tamin'ny mpitsara - Ny Farisiana sy ny poblikàna - Ny zazakely - Ilay mpanan-karena tsy nanaraka an'i Jesoa - Ny nilazan'i Jesoa ny fijaliany - Ilay jamba tao Jerikao.
1Ary nanao fanoharana tamin'izy ireo koa izy, momba ny tsy maintsy ivavahana lalandava sy amim-paharetana. 2Hoy izy: Tany amin'ny tanàna anankiray nisy mpitsara anankiray tsy natahotra an'Andriamanitra sy tsy mena-maso olona. 3Ary tao amin'izany tanàna izany koa, dia nisy mpitondratena anankiray nankao aminy matetika nanao hoe: Omeo rariny aho amin'ilay miady amiko; 4fa tsy nanaiky na oviana na oviana izy. Kanjo tamin'ny farany dia hoy izy anankampo: Na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aza aho sy tsy mena-maso olona, 5dia manahirana ahy ity mpitondratena ity, ka homeko rariny izy mba tsy hiverimberina mandrakariva hanorisory ahy. 6Ary henoy, hoy ny Tompo, izay lazain'ilay mpitsara tsy marina, 7ka Andriamanitra indray va no tsy hanome rariny ny olom-pinidiny izay mitaraina aminy andro aman'alina, ary tsy halaky hamonjy azy? 8Lazaiko aminareo fa homeny rariny haingana izy ireo. Kanefa rahefa tonga ny Zanak'olona, moa mba hahita finoana etý ambonin'ny tany izy?
9Dia nanao ity fanoharana ity koa izy, mankamin'ny sasany natoky tena ho marina sy nanebaka ny namany: 10Nisy roa lahy niakatra hivavaka tany an-tempoly: Farisiana ny iray ary poblikàna ny anankiray. 11Nitsangana ilay Farisiana ka nivavaka tao am-pony hoe: Andriamanitra ô, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona hafa izay mpangalatra, tsy marina, mpijangajanga, na tahaka itsy poblikàna itsy akory aza; 12mifady hanina indroa isan-kerinandro aho, ary mandoa ny am-pahafolon'ny fananako rehetra. 13Fa ilay poblikàna kosa nijanona eny lavidavitra eny sady tsy sahy niandrandra ny lanitra akory, fa nandona ny tratrany nanao hoe: Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko, fa mpanota aho. 14Lazaiko aminareo fa ity no nidina efa nohamarinina tany an-tranony, fa tsy ilay anankiray; fa izay rehetra manandra-tena no haetry, ary izay manetry tena no hasandratra.
15Ary nisy koa olona nitondra zazakely ho eo aminy mba hametrahany tànana: fa nony nahita izany ny mpianatra dia niteny azy ireo. 16Nefa nantsoin'i Jesoa hankeo aminy kosa ireo ka nataony hoe: Avelao hanatona ahy ny zazakely, ary aza sakanana izy, fa ny toa azy no hanana ny fanjakan'Andriamanitra. 17Lazaiko marina aminareo, fa izay tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra any akory.
18Ary nisy lehibe anankiray nanontany azy hoe: Ry Mpampianatra tsara ô, inona no hataoko hahazahoako ny fiainana mandrakizay? 19Dia hoy Jesoa taminy: Ahoana àry no iantsoanao ahy hoe: tsara? tsy misy tsara afa-tsy Andriamanitra irery. 20Fantatrao ny didy hoe: Aza mamono; aza mijangajanga; aza mangalatra; aza miampanga lainga; manajà ny rainao aman-dreninao. 21Dia hoy izy: Efa nitandrina izany rehetra izany hatry ny fony kely aho. 22Nony nandre izany Jesoa, dia nanao taminy hoe: Zavatra iray loha no tsy ampy aminao: amidio ny fanananao rehetra ka omeo ny mahantra, dia hanan-drakitra any an-danitra hianao, ary avia hanaraka ahy. 23Fa nony nandre izany teny izany izy, dia nanjonitra, satria mpanan-karen-doatra izy.
24Koa hoy Jesoa nony nahita azy nalahelo: Akory ity hasarotry ny hidiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra! 25Fa moramora kokoa ny hidiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny hidiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. 26Dia hoy izay nihaino hoe: Iza àry no ho voavonjy? 27Ka hoy ny navaliny: Izay tsy azon'ny olona atao, dia azon'Andriamanitra atao. 28Ary hoy Piera: Indro izahay efa nandao ny zavatra rehetra ka nanaraka anao. 29Dia hoy Jesoa taminy: Lazaiko marina aminareo fa na iza na iza handao ny tranony, na ny havany, na ny rahalahiny, na ny vadiny, na ny zanany noho ny fanjakan'Andriamanitra, 30dia sady hahazo bebe kokoa amin'izao fiainana izao, no hanana ny fiainana mandrakizay any aoriana.
31Nony inona dia nalain'i Jesoa manokana ny roa ambin'ny folo lahy ka nilazany hoe: Indro miakatra ho any Jerosalema isika, ka ho tanteraka izay rehetra nosoratan'ny mpaminany ny amin'ny Zanak'olona: 32fa hatolotra amin'ny jentily izy ka hoesoina, holatsaina, hororàna, 33ary rahefa voakapoka dia hovonoina, fa hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. 34Tsy nisy azon'izy ireo anefa izany, fa teny miafina ho azy ka tsy fantany akory izay heviny.
35Nony mby tao akaikin'i Jerikao izy, dia nisy kosa jamba anankiray nipetraka nangataka teo amoron-dàlana. 36Ary nony nandre ny vahoaka nandalo izy dia nanontany hoe inona izany? 37ka nilazana fa Jesoa avy any Nazareta no nandalo. 38Dia niantso izy nanao hoe: Ry Jesoa Zanak'i Davida ô! mamindrà fo amiko. 39Noraran'izay teo aloha izy mba hangina, fa vao mainka niantso mafimafy kokoa nanao hoe: Ry Zanak'i Davida ô! mamindrà fo amiko e! 40Dia nijanona Jesoa, ka nasainy hoentina mankeo aminy izy. Ary nony tonga teo akaikiny dia nanontaniany hoe: 41Inona no tianao hataoko aminao? Ary hoy izy: Mba hahiratra aho, Tompoko. 42Dia hoy Jesoa taminy: Mahiràta, ny finoanao no nahavonjy anao. 43Niaraka tamin'izay, dia nahiratra izy ka nanaraka azy sy nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra nahita izany koa nidera an'Andriamanitra. >